ရပ်ရွာ၏ 10 အကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ်များ - တီဗီ
ရပ်ရွာ၏ 10 အကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ်များ
10 Best Episodes Community
Austin, TX - မတ် ၁၅ ရက်။ ။ (LR) အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Chris McKenna၊ သရုပ်ဆောင်များ Paget Brewster၊ Gillian Jacobs၊ Alison Brie၊ Jim Rash၊ Ken Jeong၊ To to Digital '၂၀၁၅ SXSW ဂီတ၊ ၂၀၁၅ မတ်လ ၁၅ ရက်၊ Austin ရှိ Austin Convention Center တွင် S + S ဂီတ၊ (SXSW အတွက် Travis P Ball / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Big Time Rush ရာသီ ၅ ရှိပါသလား။ အဆိုပါ Irregular ookုံ spooky နှင့်နှလုံးနွေးထွေးသောဟန်ချက်ညီ
၁။ အခြေခံကျသော Numismatics (ရာသီ ၅၊ ။ ။ ၃)
သူတို့ကကျောင်းရဲ့နာမည်ဆိုး Ass Crack Bandit ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ် Radiohead ရဲ့တွားတစ် ဦး acoustic ဗားရှင်းနှင့်အတူစတင်, ဒီပုံပြင် Annie နှင့်ဂျက်ဖ်အောက်ပါအတိုင်း။ ဒါဟာ noir နှင့် whodunit လူသတ်မှုနက်နဲသောအရာ၏ပြီးပြည့်စုံသောရောနှောပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်မိုက်မဲပြီးထိပ်ဆုံး (သို့သော်အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်) ဖြစ်စဉ်ကအဆုံးသတ်ကိုအပြည့်အဝတံဆိပ်ခတ်ထားသည့်အုပ်စုနှင့်အတူစိတ်ပျက်ဖွယ်အခိုက်အတန့်သို့ရောက်သွားသည်။
၂။ အလယ်အလတ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်း (ရာသီ ၂၊ အပိုင်း ၁၆)
ပီယပ်စ်သည်သူနှင့်အတူနေရန်အလျင်အမြန်ရောက်ရှိနေသောဆေးရုံသို့တင်လိုက်ရသည်။ မိမိအတောင်းဆိုချက်မှာ Abed ရုပ်ရှင်သူသည်သူသေဆုံးရဲ့သောသူအပေါင်းတို့ကိုပြောပြပြီးနောက်ပီယပ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးအချိန်လေး၏မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်။ ဂန္ထဝင်ပီယပ်စတိုင်ဖြင့်သူသည်အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး စီအားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုအဖြစ်ပြုမူသောလက်ဆောင်ကိုပေးသည်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲသရုပ်ဆောင် (ဥပမာ LeVar Burton နှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက် Troy ရဲ့ပျက်ပြား) မှအချို့သောအကြီးအသရုပ်ဆောင်ရှိပါတယ်နှင့်လည်းအချို့သောတိတ်ဆိတ်လေးနက်အချိန်လေးခွင့်ပြုပါတယ်။
၃။ လူ့မှတ်ဉာဏ်၏စံနမူနာများ (ရာသီ ၂၊ အပိုင်း ၂၀)
အကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ ရပ်ရွာ ဒါကတီဗီအပူပိုင်းဒေသတွေကိုအမြဲတမ်းချစ်ရေးရေးတဲ့စာပါ ဤဇာတ်လမ်းသည်ဂန္ထဝင် clip show ကိုဖွင့်သည်။ သို့သော်အားလုံးသည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်များမှဖြစ်သည်။ ပရိသတ်များသည်အဖွဲ့ကိုကျပန်းနှင့်ထူးထူးဆန်းဆန်းဆက်တင်များဖြင့်တွေ့သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်မရသောအခါအ Greendale ခုနစ်ခုတက်ရရှိသွားတဲ့အရာကိုဖေါ်ပြခြင်း၏လိမ္မာပါးနပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
၄။ မင်္ဂလာဆောင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း (ရာသီ ၆၊ Ep ၁၂)
ရာသီ6အစောပိုင်းရာသီအချို့ကဲ့သို့အများကြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာမရပေမယ့်, ဒီဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုအမြဲဖျော်ဖြေမှုပြန်လည်နာရီဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ဂိုဏ်းတစ်ခုဇာတ်လမ်းတွဲကဲ့သို့ရိုက်ကူးနေစဉ်မင်္ဂလာဆောင်ပျက်ကျမြင်နေရတယ် ရုံး ။ Winger မိန့်ခွန်း (နှင့် Chang version) နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သော Frankie နှင့် Leroy အချိန်များကိုရရှိနိုင်သည်။ ဒါဟာလူတိုင်းကိုညာဘက်ဇာတ်သိမ်းမီအတူတကွဖြစ်ခြင်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ပေါ့ပေါ့ဆဆနှင့်ရယ်စရာဇာတ်လမ်းတွဲပါပဲ။
၅ ။ Abed ရဲ့မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ခရစ်စမတ် (ရာသီ ၂၊ Ep.11)
အဆိုပါသရုပ်အဆိုပါလွမ်းဆွတ် Rankin ဘေ့အားလပ်ရက်အထူးမှညိတ်အဖြစ် claymation ကိန်းဂဏန်းများအဖြစ်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုလုံးကိုသုံးစွဲသည်။ Abed သူ့အမေဒီနှစ်သူနှင့်အတူဆင်နွှဲရန်အိမ်ပြန်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်အဖြစ်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခရစ္စမတ်ဂီတစွန့်စားမှုနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒရာမာဖြစ်ပါတယ်။
6. ဝေဖန်ရုပ်ရှင်လေ့လာရေး (ရာသီ 2, Ep ။ 18)
ဤဖြစ်စဉ်သည် Abed နှင့် Jeff တို့နှင့်အတူမြင့်မားသောစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင်ရှည်လျားသောညစာစားပွဲဖြစ်သည်။ Abed ကဂျက်ဖ်အားမိမိအချိန်အကြောင်းကိုပြောပြစဉ်ပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့် ပို၍ ရင့်ကျက်သောအပြုအမူကိုပြုမူသည် Cougar မြို့ နှင့်မည်သို့ကြောင့်ဘဝအပေါ်သူ၏ရှုထောင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဤအတောအတွင်းအုပ်စု Abed သည်သူ၏ရောက်ရှိလာမည်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည် တမင်တကာသည်းထိတ်ရင်ဖိုဖြစ်အောင်ရေးသောစာအုပ်စာပေ- ရေးရာအံ့အားသင့်စရာပါတီ။ အဆိုပါစိတ်ကူးဝတ်စုံကနေရန် Andre နဲ့အတူညစာစား Vibes နှင့် Abed ရဲ့ Hilary နှင့်ကြေကွဲဖွယ် monologues, ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကိုမေ့လျော့တစ်ခုမဟုတ်ပါ!
၇။ ခေါင်းအုံးနှင့်စောင်များ (ရာသီ ၃၊ Ep ၁၄)
ဘယ်တော့လဲ ရပ်ရွာ ကြီးမားတယ်၊ ကြီးမားတယ်၊ ခေါင်းအုံးနဲ့စောင်တွေကခြွင်းချက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အဖြစ်ရိုက်ကူးထားသောဤဇာတ်လမ်းသည်ရှုပ်ထွေးသောခေါင်းအုံးနှင့်စောင်ခံတပ်များ၊ ဝတ်စုံများနှင့်မြို့နှစ်မြို့အကြားရှိတိုက်ပွဲများအထိပင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ပရိသတ်များအနေဖြင့်လည်းစိတ်ကြေကွဲဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း Troy နှင့် Abed အချိန်လေးများကိုစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသောရယ်မောခြင်းများနှင့်အတူတင်းမာမှုများကိုဖြိုခွဲရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။
၈။ ပြန်လည်ကုစားရေးသီအိုရီ (ရာသီ ၃၊4၄)
Troy နှင့် Abed တို့သည်သူတို့၏တိုက်ခန်းအသစ်တွင်အိမ်ဖော်များနှင့်မိတ်ဖွဲ့ရန်အတွက်သူငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ကြားသည်။ ညသည်မကောင်းသောအစပြုပြီးဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့၏ပီဇာဖြန့်ဝေမှုအတွက်မည်သူတံခါးဖွင့်ပေးမည်ကိုဂျက်ဖ်ကအန်စာတုံးကိုလှိမ့်လိုက်သည့်အခါ ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာသည်။ Abed သူဇာတ်လမ်းတွဲစူးစမ်းခြင်းနှင့်အချို့ကျိန်းသေသံလမ်း (သို့သော်အများဆုံးဖျော်ဖြေမှုလမ်းအတွက်) ကိုချွတ်သွားရသောခြောက်လကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇယားကိုဖန်တီးမယ့်က Jeff အကြောင်းကြား!
၉။ ကူးစက်ရောဂါ (ရာသီ ၂၊ အပိုင်း ၆)
အုပ်စုသည်စာကြည့်တိုက်တွင်းရှိဝတ်စုံများဝတ်ဆင်ထားသောကျောင်းသူ / သားများသည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအသားအချို့ကိုစားသည့်အခါ ပို၍ ဆိုးလာသည်။ သူတို့သည်ဖုတ်ကောင်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးသူတို့၏ရောဂါကိုကိုက်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ကူးစက်နိုင်သည်။ ABBA တေးသံဖြင့်ဆက်ရှင်သန်ရန်အုပ်စုကတိုက်ပွဲဝင်နေစဉ်ရောဂါသည်ပါတီတစ်ခုလုံးတွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။
၁၀။ ခေတ်သစ်စစ်ဆင်ရေး (Season1၊ ။ ။ ၂၃)
ဤသည်ကစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းဖို့မရှက်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထိုကဲ့သို့သောအထင်ကရဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီ 1 နည်းနည်းပိုပြီးပုံမှန်ထွက်စတင်လူသိများသည်နှင့်ဤပြပွဲနောက်ဆုံးတော့သူ့ဟာသူကူးပြောင်းနှင့်ဖြစ်လာသည့်အခါဤသည် ရပ်ရွာ ငါတို့တွေအားလုံးသိပြီးချစ်ကြတယ်။ အဆိုပါကျောင်းဝင်းကစားသမားအစောပိုင်းမှတ်ပုံတင်ဘို့ယှဉ်ပြိုင်ဘယ်မှာတစ်ခု All- ထွက် paintball စစ်ပွဲသို့ထွက်သည်။ ဒီတစ်ခုဟာအံ့ action စရာကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များနှင့်ဇာတ်ကောင်များနှင့်ပြည့်နေပြီးကျန်အပိုင်းအတွက်ဘားကိုသတ်မှတ်သည်။
ရပ်ရွာ လက်ရှိ Hulu နှင့် Netflix နှစ်ခုလုံးအပေါ် streaming ဖြစ်ပါတယ်။
ခိုငျမွဲ kimmy Schmidt ရာသီ2ဇာတ်လမ်းတွဲ 12
လွဲချော် Fisher နက်နဲသောအရာရာသီ3Netflix
Coco Netflix မှလာပေတဲ့အခါမှာ
ဒီညအပေါ် Bates မိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်